Booliska Somaliland oo rasaas ku kala ceryiyey arday debadbax ku dhigayey Hargeysa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa – Mareeg.com: Mudaharaad nabadeed oo ay ardayda Jaamacada Hargeysi kaga gadoodsanyihiin lacago uu maamulka Jamacada Hargeysa ku kordhiyey ayaa maanta ka dhacay magaalada Hargeysa.
Mudaharaadkan oo ay soo abaabuleen ardayda jaamacada ayaa waxaa ay ka soo bilaabeen agagaarka jaamacada Hargeysa waxaana ay ardaydani iyaga oo sita baadhadh ay ku xardhan yihiin sida ay uga soo horjeedaan lacagtan ay isku dayayeen in ay socdaal ay ku hormaraan wasaarada waxbarashada si ay halkaasi ugu muujiyaan cabashada ay qabaan.
Markii ay ardaydu marayeen agagaarka boondada labaad ee magaalada Hargeysa ayaa ciidamo aad u tirabadan oo uu horka caayo taliyaha ciidanka booliska Somaliland, Cabdilaahi Fadal Iimaan ay halkaasi ardayda ku joojiyeen, waxaana ay halkaasi rasaas xoogan ooda kaga qaadeen ardaydii dhigaysay mudaharaadka.
Ma jiraan ilaa hada wax khasaare ah oo ay rasaastaasi gaysatay, balse warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ku dhawaad ilaa 20-arday loo taxaabay xabsiga.
Ardaydan ayaa waxaa ay si aada uga cabanayeen lacag dhawaan maamulka jaamcada Hargeysi ku kordhiyey waxaana ay oo marka loo eego heerka la kordhiyey ah mid aad u qaaliya, sida ay ardaydu leeyihiin, waxaana Semisterkiiba ardayda lagu kordhiyey lacag dhan $45-dollar, sidaa waxaa qoray Ramaas News.
Ardayda ayaa diidan sare u qaadis lagu sameeyey lacagtii jaamacada lagu dhigan jiray oo la kordhiyey sanadkii 2013.